Amabhuzu ukuba abe nenhle kulokhu kuwa | Amadoda aSitayela
Ukuba namabhuthi amahle ebhakedeni lethu lezicathulo kuzosivumela ukuthi sibhekane nekilasi elihle izinsuku eziningi ezimanzi ezisazokwenzeka, kokubili ehhovisi nalapho siphuma siyophuza, kodwa Yisiphi isitayela samabhuzu esihle kakhulu?
I-Las Amabhuzu e-Chelsea Babhekwa ngabaningi njengabanhle kakhulu ngenxa yendlela yabo yokwenza isitayela. Ngaphezu kwalokho, ahlangana kahle nawo womabili amabhulukwe amasudi kanye namajini (ikakhulukazi uma ezacile).
Ngaphezulu kwale migqa ungabona esinye sezibonelo ezinhle kakhulu zobuhle ezinikezwa amabhuzu e-Chelsea. Yenziwe ngesikhumba sangempela, lo mbhangqwana ongenacala ulethelwa thina ngu isignesha H ngu-Hudson Futhi ingatholakala ku-Asos ngama-euro angu-127,99, ukukhishwa okuphawulekayo, ngokungangabazeki, kodwa okwenziwa ngokuzithandela uma kukhulunywa ngezicathulo ezaziwa ukuthi zihlala impilo yonke, njengoba kunjalo.
I-Las Amabhuzu eDerby, enozwane oluyindilinga nezintambo zezintambo, kungolunye uhlobo lwebhuthi yakudala ebonakala ngobuhle bayo. Uma benikela ngokungaphezulu noma ngaphansi kuneChelsea, lokho kuya ngombono walowo nalowo. Ngokunambitha kwethu, zingaphansi kancane kwalesi sici, kepha namanje amabhuzu asesitayeleni kakhulu.
Njengoba umbala onsundu umbala wekwindla, futhi ngokungafani nombala omnyama wesiphakamiso esedlule, sincoma lokhu kusuka ku- isignesha Aldo, Iphinde yenziwa ngesikhumba esingu-100%. Intengo yayo: ama-euro angu-135,99 e-Asos. Njenge-Chelsea, nabo bazobukeka behle ngesudi noma njengengxenye yokubukeka okungahlelekile ngokwengeziwe.
Noma ngabe uthatha isinqumo ngeChelsea noma iDerby, uzobe wenza isinqumo esifanele. Lezi yizitayela ezimbili ezihluke kakhulu, kepha zinokufana okufana nokwenziwa kobuhle bokubukeka kwethu. Kepha ukukusiza uthathe isinqumo, Sincoma iChelsea uma uyisudi kanye neDerby uma uthanda ijini.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Calzado » Yimaphi amabhuzu amahle kakhulu kulokhu kuwa?
Ukwabelana ngogesi - Izinzuzo nezinkinga